साधारण सभा भनेको के ? वार्षिक साधारणसभा बारे जान्नैपर्ने यी कुरा (पढ्नुस्):: Artha Dabali
साधारण सभा भनेको के ? वार्षिक साधारणसभा बारे जान्नैपर्ने यी कुरा (पढ्नुस्)
काठमाडौं / कुनैपनि सङ्गठित संस्थाको शेयरपूँजीमा हक भएका शेयरधनीसहितको संयुक्त छलफल कार्यक्रमलाई साधारणसभा भनिन्छ ।
साधारणसभालाई शेयरवालाहरूले कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बोल्ने र सुझाव दिन मिल्ने अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यस सभाबाट सबै शेयरधनीको उपस्थितिमा कम्पनीको समग्र विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
कम्पनीले गर्ने मुख्य निर्णयलाई साधारणसभाबाटै वैधानिकता प्रदान हुने हुँदा यसको महत्व बढी छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा सामान्यतया कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदनजस्ता विषयमा छलफल गरिन्छ ।
साधारणसभा नै यस्तो स्थल हो, जहाँ कम्पनीको अवस्थाको बारेमा यथार्थ जानकारी लिन लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । साथै, कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरेका प्रदाधिकारीलाई नजीकबाट नियाल्ने अवसर पनि मिल्छ ।
सामान्यतया कम्पनीको साधारणसभा दुई प्रकारका हुन्छन् । वार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभा ।
कम्पनीले १ वर्षको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजना सहित छलफलका लागि बोलाएको सभालाई वार्षिक साधारणसभा र कम्पनी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक ठानी बोलाइने सभालाई विशेष साधारणसभा भनिन्छ ।
विशेष साधारणसभा कम्पनीको सञ्चालक समितिले बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने सदस्यले वा शेयरधनीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले माग गरेको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र बस्नेगरी कम्पनीको विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्नेछ ।
वार्षिक साधारणसभाका लागि २१ दिन र विशेष साधारणसभाका लागि १५ दिनअगाडि साधारणसभा हुने ठाउँ, मिति, छलफल गर्ने विषय प्रस्ट उल्लेख गरी सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, स्थगित भएको कुनै साधारणसभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ विषयमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा ७ दिनअघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
साधारणसभाका लागि ऐनमा भएको व्यवस्था
कम्पनी ऐन २०६३ ले प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्ने अनुमति पाएको १ वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महीनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ ।
साधारणसभामा कम्पनीको कुल शेयर सङ्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शेयरधनी वा प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्र्नेछ । गणपूरक उपस्थिति नपुगेका कारण साधारणसभा हुन नसकेमा ७ दिनको सूचना दिई अर्कोपटक सभा बोलाउँदा कुल शेयर सङ्ख्याको २५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीनजना शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको नाम, ठेगाना र निजहरूले लिएको शेयर सङ्ख्या उल्लेख भएको सूची शेयरधनीहरूबाट हुने निरीक्षणका लागि साधारणसभा हुने स्थलमा राख्नुपर्नेछ । कम्पनीले साधारणसभा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको जिल्ला वा सोसँग जाडिएका अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नुपर्नेछ ।
कस्ता प्रस्ताव पेश गर्ने ?
कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउन, शेयर पूँजी हेरफेर, नाम र मुख्य उद्देश्य परिवर्तन गर्न, कम्पनी गाभिने विषय, बोनस शेयर जारी गर्ने, प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक वा पब्लिकबाट प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषयमा निर्णय गर्न साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्दछ ।
यस्ता प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछन् । कम्पनीले यी प्रस्ताव पारित गर्दा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक परेमा साधारणसभामार्फत नै संशोधनको निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले अति आवश्यक निर्णय सञ्चालक समितिमार्फत गरेमा साधारणसभामा सदस्यहरूलाई जानकारी गराई अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ । यदि सभामा छलफलका क्रममा कुनै विषय थप गर्न आवश्यक देखिएमा पनि विविध शीर्षक दिएर पेश गर्न सकिन्छ ।
साथै, कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन प्रतिनिधिको रूपमा हुने सञ्चालक चयन तथा फेरबदल गर्नुपरेमा पनि साधारणसभामार्फत निर्विरोध निर्वाचित गराउन प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ ।
यही तोकिएको कार्यकाल अघि नै कुनै सञ्चालकले राजीनामा दिएमा र सञ्चालक समितिको निर्णयमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेमा पनि सो निर्णयलाई सभामा पेश गरी अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।